प्रह’रीले यात’ना दिएर हिरा’सतभित्रै गम्भिर घा’इते बनाएको आरो’प ; घाइ’तेको मृगौलामा समेत सम’स्या – Sadhaiko Khabar
प्रह’रीले यात’ना दिएर हिरा’सतभित्रै गम्भिर घा’इते बनाएको आरो’प ; घाइ’तेको मृगौलामा समेत सम’स्या
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत्र २९, २०७७ समय: १९:०५:२०
पथरी शनिश्चरे(मोरङ)/ मोरङको कानेपोखरी–२ का ४७ वर्षीय बुदन चौधरीलाई हिरा’सत भित्र नै कु ट पि ट हुँदा मृगौलामा समस्या आएको छ । हिरा’सतमा लिइएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय पथरीमा उनको मृगौलामा स’मस्या आएको परिवारले जनाएको छ । यौन’हिंसाको आरो’पमा चौधरीलाई गत चैत १६ गते प्रह’रीले नियन्त्र’णमा दिएको थियो ।
इलाका प्र’हरी कार्यालय पथरीको नियन्त्र’णमा रहेका चौध’रीको दाहिने कानको माथिल्लो भागको कपाल उ खे लिएको छ । ज वर ज स्ती कपाल ता नि एको कारण त्यहाँ चो ट दे खि एको बताइएको छ । बेलाबेला अ’चेत हुने चौधरीको चा’क र त्यस माथिल्लो भागमा र गत ज मे का डा महरू रहेको छ । प्रह’रीको पिटा’इबाट घा’इते चौधरीलाई २१ गते प्रह’रीले नै उर्लाबारीस्थित मंगलबारे अस्पतालमा उपचारको लागि लगेको थियो ।
मंगलबारे अस्पतालले विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालमा रिफर गरेपछि उनको अहिले त्यहीँ उपचार भइरहेको छ । अस्तालको बेडमा रहेका चौधरी बेलाबेला झ’स्किने र बेहो’समा जथा’भावी बोल्ने समस्या अझै रहेको पत्नी शान्ति चौधरीले जनकारी दिईन् ।
प्रह’रीले नियन्त्र’णमा लिएको चार दिनसम्म चौधरीमा कुनै सम’स्या थिएन । चौधरीकी श्रीमती शान्ति इलाका प्रह’री कार्यालय श्रीमान् भेट्न जाँदै आउँदै गर्थिन् । २० गते चौधरीलाई प्रह’रीले यस्तो बनाएको शान्तिको भनाइ छ । हरेक दिन भेट्न जाँदा पारिवारिक र व्यवहारिक कुराकानी हुन्थ्यो ।
२० गते अपरान्ह जाँदा “ऐ’या! ऐ’या!!” भनेपछि प्रह’रीबाट कुट’पिट भएको थाहा पाएको शान्तिको भनाइ छ । कान छेउको कन्सिरीको कपाल उ खे लि एको चो ट, चा’क र ढाडमा निलडाम भएका चौधरीलाई अस्पताल पुर्याइए पनि दुई दिनसम्म आवश्यक औषधि नचलाएको परिवारको आरो’प छ ।
प्रह’रीले औषधि नदिएपछि पाँच हजारको औषधि आफै किनेको उनले बताइन् । प्रह’रीले अमान’वीय रूपमा यस्तो गरेर घाइते बनाएको मानव अधिकारवादी संस्थामा उ’जुरी दिएपछि मात्र औषधि चलाउन थालेको घा’इते चौधरीका ज्वाइँ हरि चौधरीको भनाइ छ ।
मानव अधिकारवादी संस्थामा उजुरी दिएपछि जिल्ला प्रह’री कार्यालय मोरङका प्रवक्ता डीएसपी मानबहादुर राईको संयोजकत्वमा अनुस’न्धान समिति गठन भएको छ । डीएसपी राई इलाका प्रह’री कार्यालय पथरी आएर सोधखोज गरेर फर्केका छन् । प्रह’रीले भने यस्तो गरेको कुरा अस्वी’कार गर्दै आएको छ ।
सो घ’टना हुनुपूर्व इलाका प्रह’री कार्यालय पथरीका प्रमुख डीएसपी कृष्ण खड्का घर विदामा गएका थिए । इलाका प्रह’रीमा इन्स्पेक्टर अनिलकुमार पौडेल निमित्त प्रमुख थिए । तत्कालीन निमित्त प्रमुख पौडेलले बुदन चौधरीलाई यस्तो नगरेको थुनु’वाहरूसँग झ ग डा भएर नि ल डा म भएको बताए ।
घा’इते बुदन चौकरीकी पत्नी शान्ति चौधरी भने सो कुरा मान्न तयार छैनन् । यतिको निल’डाम हुने गरी, केश उखेलिन्जेल अस्पताल भर्ना हुने गरी थुनुवा झ ग डा न हुने र भएपनि सुरक्षा गार्डले छुटाउनुपर्ने त’र्क गर्दै पतिलाई बाहिर निकालेर म रणा स न्न हु ने गरी यस्तो गरेको दावी गर्छिन् । आफ्नो परिवार गरिव भएको कारण आवश्यक सहयोग नपाएको उनको गुनासो छ ।
कुट’पिटमा संलग्न प्रहरी’लाई छानविन गरी क डा का र बाही र पतिको पूर्ण उपचार हुनुपर्ने शान्ति चौधरीको माग छ । छानविन समितिका संयोजक डीएसपी मानबहादुर राईले बुदन चौधरी न’सालु पदा’र्थ से’वन गर्न नपाएपछि अर्ध’चेत अवस्थामा थुनुवाहरूलाई यस्तो गर्न थालेपछि हिरा’सतभित्रै हत’कडी लगाएर राख्नुपर्ने अवस्था आएको जनाए ।
चैत २० गतेदेखि रातभर क’राउने, गाडीको ब्रेक लगाएको भन्दै अन्य थुनु’वालाई ला’त्तले हा’न्ने, यस्तो गर्न थालेपछि चौधरीलाई थुनु’वा कोठामै हत्क’डी लगाएर राखिएको अनुसन्धा’नको क्रममा बुझेको जिल्ला प्र’हरी प्रवक्ता मानबहादुर राईको भनाइ छ । कोशी अस्पताल विराटनगरमा उपचार गर्ने क्रममा बुदन चौधरीको मृगौ’लामा समेत स’मस्या देखिएको छ ।
प्रह’रीकै पिटा’इबाट मृगौलामा सम’स्या आएको बुदनकी पत्नी शान्ति र ज्वाइँ हरि चौधरीको भनाइ छ । उनीहरूले प्रह’रीको हिं’सामा परेका बुदन चौधरीको पूर्ण उपचार गर्न माग गरेका छन् । बुदन चौधरीलाई यौ’न हिं’सा सम्बन्धी मु’द्दा चलाएको इलाका प्रह’री कार्यालय पथरीका प्रमुख डीएसपी कृष्ण खड्काले जानकारी दिए ।